allsanaag.com - Ma Ceebtiinaad Rabtaan Inaan Kashifo
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3208	Days	11	Hours	18	Minutes	39	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Ma Ceebtiinaad Rabtaan Inaan Kashifo
Written by Shanle	Sheeko gaaban ayaa dhex martay maamulka Hargeysa ka jira iyo dawlada Ingiriiska.
Maamulka Hargeysa: Ingiriisoow waa maxey sheekadan cusub ee aad la timi?
Ingiriiska: Sheeko cusub lama iman ee idinka ayaa sheeko aan fiicneen wada.
M.Hargeysa: Oo Ingiriis maxaad qoonsatay?
Ingiriiska: Waxaan qoonsaday inaad tihiin dadka dhibka ka wada Koonfurta Soomaaliya inaad tihiin idinka ayaa ii baxday, oo Shabaab baad ku abuurteen Koonfurta si nabad aysan u iman. Hawiye ayaad madaxa u geliseen Daarood oo tiraahdeen anagaa Irir isla nahay ilaa maantana idinka ayey Koonfurta idinka degi la’dahay.
M.Hargeysa: Oo maxaa kaaga gidhiisha?
Ingiriiska: Waxaad dooneysaan inaad dadka intaad dagaal iyo balo aad ka dhex abuurtaan inaad dabadeed tiraahdaan na arag iyaga nabad ma’aha ee anagaa nabad ah ee na aqoonso. Ma aqoonsi ayaa sidaa lagu raadiyaa?
M.Hargeysa: Ingiriisoow anagu waxaan la soo noqonay dawladii aan ku darsanay Koonfurta Soomaaliya 60kii; ma taasaa dhib ah?
Ingiriis: Waxaad dooneysaan inaad dhul eydaan laheen iyo dad aydaan isku qabiil aheen inaad xoog ku kaxeesataan, oo dabadeedna tiraahdaan Soomaaliland baanu nahay. Mataasaa wax la aqbali kar ah?
M. Harageysa: Ingiriis dadka oo dhan maamulka waa u dhan yihiin ee cid la qasbayaa ma jirto.
Ingiriis: Xitaa anaa! Ma anigii ayaa iila timaadeen beentiina, miyaanan aheen dadka dhulka iyo dadkaba idiinkaga xog roon. Ma dhawrka nin ee tolkoodii ka soo tagey ee weliba qayilaada soo doontay ayaa matala gobolada qaar;teeda kale dad baad iska weerartaan oo aad xasuuqdaan; ma taasaa wax loo dul qaadan kara ah. War heedhe isku xishooda.
M. Hargeysa: Oo inaad sidan aqli dhaanto ayaan kuu qabnayee.
Ingiriis: Hadaa ma idinkaa caqli meesha ku haya? Dadkiinii ayaad ka carareesaan; bal anaga fiiri waxaan wada soconaa Fransiis, Jarmal, Isbaanish oo aynaan isku af aheen idinka kuwii aad isku afka iyo diinta aheedeen baad ka carareesaa. War heedhe ma ceebtiinaad rabtaan inaan banaanka soo dhigo.
M. Hargeysa. Aar Ingiriiskii nagu keen keenyee aanu North Korea iyo Cuba la xirano, ileen si kale socon meesee.
Ingiriis: Ordoo meeshaad doontaan ka dhaca; miraha aad ka soo gurataana waxba ha iga siinina, maca sallaama.